Momba anay - Yuncheng Kangda Steel Ball Co., Ltd.
Amin'ny maha mpanamboatra baolina vy matihanina azy dia manolo-tena hanatsara hatrany ny kalitaon'ny vy vy i Condar, mampifanaraka ny kalitaon'ny baolina vy amin'ny vokatra avo lenta ary manome tolo-kevitra momba ny fanoratana vokatra mahomby ho an'ny mpanjifa.
Nandritra ny 20 taona mahery dia tsy namokatra vokatra baolina fotsiny izahay, izay matihanina kokoa noho ny fiheverana irery. Izahay dia mamokatra baolina vy miteraka, baolina vy tsy miova ary baomba vy vy. Ny fepetra faratampony dia 0.3mm-200mm, ary ny marika lehibe indrindra dia G5-G1000. Azontsika atao ny manodina sy manamboatra habe isan-karazany amin'ny baolina arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa, ao anatin'izany ny bolongaly perforated, baolina saucer manidina, baolina elektroplated, baolina varahina, baolina aluminium, baolina seramika ary baolina fitaratra, ny famokarana isan-taona ny baolina plastika sy ny vokatra baolina hafa dia manodidina ny 3 miliara.
Ny orinasa dia manarona faritra mihoatra ny 10.000 metatra toradroa, miaraka amina fitaovam-pamokarana baolina vy an-jatony maro, fitaovana sy fitaovana fitiliana am-polony ary teknisianina mihoatra ny folo manana traikefa famokarana folo taona. Manomboka amin'ny fividianana akora isika, mifehy tsara ny fizotrany tsirairay, manamboatra ny kalitaon'ny vokatra, ary ny fitantanana siantifika dia manome antoka matanjaka amin'ny famokarana baolina vy avo lenta.
Steel ball no singa fototra indrindra, ary be mpampiasa izy io. Ampiasaina indrindra amin'ny sehatry ny bearings, fitaovana, kojakoja fiara, elektronika, akora simika, asa-tanana, vokatra plastika, sns. Izy io dia saika amin'ny toerana mihodina rehetra.
Nandritra ny 20 taona mahery, nifikitra hatrany amin'ny fitantanana tsy fivadihana izahay, mieritreritra izay eritreretin'ny mpanjifa, ary mitebiteby amin'ny mpanjifa. Ny kibon'ny vy Condar dia eken'ny mpanjifa an'arivony ao an-trano sy any ivelany, ary ny marika "Condar" dia nahazo dera iraisan'ny mpanjifa, ary niara-niasa nandritra ny taona maro mba hahatratrarana ny fandresena.
Tena raisinay ny fitsidihanao. Raha manana fanontaniana momba ny baomba vy ianao dia miangavy mba hamaly anao izahay raha vao haingana. Ny mailaka anay dia cdballs@cdballs.com.
Ny fitsipinay: Fitantanana ny fahamendrehana, ampiasao ny fahaizanay hanoroana vokatra mety sy mahomby ho an'ny mpanjifa.
1.Niorina tamin'ny 2000 miaraka amin'ny 20 taona niainana amin'ny famokarana sy marketing.
2. fananana SGS / ROHS taratasy fanamarinana, antoka ary ekipa fitantanana mamiratra.
3.Fitaovana famokarana mandroso sy fitaovana fitiliana.
4.Ny fananana raikitra mihoatra ny 10 tapitrisa RMB.
5. Ireo mpiasa teknika manana mihoatra ny 10 taona niainana traikefae.
6. Valan-javaboary AAAAA avo lenta toy ny trano fanatobiana entana, Tahiry lehibe sy fandefasana haingana.
7. 3Tsena anatiny 0% varotra ho fototra.
8. laza avo, mpanjifa miangona manerantany.
Manantena fatratra ny hiara-miasa amin'ny mpanjifa izahay amin'ny fotoana rehetra.